ပြင်းထန်သောနှင့်အစွမ်းထက်သောအမေရိကန် Bandogge ကိုသိရန်ကြိုးစားပါ - Breeds
အဲဒီမှာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အုပ်ထိန်းသူလို့ခေါ်တယ် အမေရိကန် Bandogge / Bandog ။
အဖြစ်လူသိများ American Bandogge Mastiff၊ American Mastiff၊ Swinford Bandog၊ MastiBull သို့မဟုတ် American Masti-Bull တို့ဖြစ်သည် ဤခွေးတစ်ကောင်သည်ကျူးကျော်သူများကိုကြောက်ရန်အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန် Bandogge နဲ့တွေ့ဆုံပါ
ဒါပေမယ့်သိပ်မမြန်တော့ Bandogge ကိုမဝယ်နဲ့။ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမှန်းရှိတယ်လို့မင်းထင်သလား။ အထဲကရှာတွေ့မှဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Bandog ဟာ Pit Bull နဲ့အတူတူလား?
ကြီးမားတဲ့ fido ၏စောင့်ရှောက်မှုတာ
Bandogge Mastiffs ဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်မှာလဲ။
ခွေးကလေးတစ်ကောင် ၀ ယ်ခြင်း - Bandogs သည်တရား ၀ င်ပါသလား။
စီရင်ချက် - အမေရိကန် Bandogge သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်သည်
မဟုတ်ပါ၊ Bandogges အလုပ်လုပ်၏ hodgepodges ဖြစ်ကြသည် နှင့်စောင့်ရှောက် ဝတ် ။ သူတို့ကနောက်ကျောမှချိန်းတွေ့တဲ့ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည် 1200s ဂိမ်းကစားသူများသည်အမဲလိုက်ရန်နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်အသုံးပြုသည့်ဥရောပမှလာသည်ဟုဆိုကြသည်။
အမှန်မှာ“ Bandog” သည်“ chain” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောအင်္ဂလိပ်စာလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ အများအပြားအစောပိုင်း Bandogges နေ့ကစဉ်အတွင်းချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခိုင်လုံလုံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ညအချိန်တွင်ချောင်ကြကုန်အံ့ခဲ့ကြသည်အဖြစ်အသုံးအနှုန်း, ဒီဖောက်ရဲ့နာမတျော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရာစုနှစ်များစွာအကြာတွင်အစာရှောင်ခြင်း 1960 John Swinford, American veterinary, breed standard ကိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
သူသည် Neapolitan Pitiff နှင့်အတူအမေရိကန် Pit Bull Terrier ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက် - ဖန်တီးရန် အပြည့်အဝကိုယ်ရံတော်ခွေး ။
Modern Bandogges သည် Molosser သွေးကြောအမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်သည်။
မာ့ဖစ် ( အင်္ဂလိပ် ဒါမှမဟုတ် Neapolitan အဘိဓါန် )
ဤအခွင့်အလမ်းများအားလုံးပါ ၀ င်သောမျိုးနွယ်အမည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ရှုံးနိမ့်သောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, 'အမေရိကန် Bandogge' ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ catchall ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် ဤအဝတ်ရည်မဆိုပေါင်းစပ် ။
မည်သို့ပင် Bandog ရဲ့အထူးသမျိုးရိုးဗီဇ၏, သူတို့ကတစ် ဦး ဖြစ်အာမခံပါတယ် အကြီးအကျယ် , ခွေးတစ်ကောင် domineering ။
သူတို့ဟာနာမည်ကောင်းရပြီး US အချို့နေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးပြုကြပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်နဲ့ Masti-Bull ဆိုတာပါပဲ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့, မေတ္တာရှင်အဖော်နိုင်ပါတယ် ။
သင်ပုံမှန် crossbreeds ခန့်မှန်းရခက်ခဲ့ကြသည်ထင်? အမေရိကန် Bandogge ကကိတ်မုန့်ကိုယူလိုက်တယ်။ နီးပါးရှိတယ် နည်းလမ်းမရှိ သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘဲကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်။
MastiBull သားမွေးကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည် brindle, အပြာရောင်သို့မဟုတ် Merle, fawn, အနီရောင်, ရွှေနှင့်အနက်ရောင်။ သူတို့ရဲ့ တိုတိုကြမ်းတမ်းသောအင်္ကျီ များသောအားဖြင့်အဖြူရောင်ထိတွေ့မှုရှိတတ်သော်လည်းပုံစံအတိအကျမှာလုံးဝကျပန်းဖြစ်သည်။
တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်, အမေရိကန် Mastiff ရဲ့ခြုံငုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုပြီးသေချာသည်။
သူတို့ကလေ့ရှိပါတယ် ကောင်းစွာ - အချိုးကျ, စတုဂံအလောင်းတွေ ။ TO သို့ မှုတ်ရင်ဘတ် နှင့် ပခုံးကျယ်များ အဆိုပါ Bandog တစ်ခု impose ရှိနေခြင်းပေးပါ။
သူတို့ရဲ့တြိဂံနားရွက်တွေကသေတ္တာတစ်လုံးရဲ့ထိပ်နားမှာထိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတွေကအနက်ရောင် (သို့) အနီရောင်ရှိပြီးမျက်လုံးကျယ်ပြီးမှောင်မိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ပါ။ အခြားအဆုံးမှာတော့ MastiBull ရဲ့သွယ်လျအမြီးတစ်အချက်မှ tapers ။
အရွယ်အစား: အမေရိကန် Bandogge Mastiffs ဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲ။
Bandogs ဖြစ်ကြသည် ကြီးမားသည် အထီးယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့အလေးချိန်အလေးချိန် 100 မှ 140 ပေါင် (45 မှ 64 ကီလိုဂရမ်) နှင့်ရပ်တယ် 19 မှ 30 လက်မ (၄၈ မှ ၇၆ စင်တီမီတာ) ရှည်သည်။
အမြိုးသမီးမြားအထီးထက်အများကြီးတိုတောင်းမဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပျမ်းမျှအားဖြင့်အလေးချိန်, သူတို့ကပိုပါးဖြစ်ကြသည် 85 မှ 100 ပေါင် (39 မှ 45 ကီလိုဂရမ်) ။
သူတို့ရဲ့ XXL ခွေးဖောက် status ကိုနေသော်လည်း Bandogges တိုက်ခန်းများသို့မဟုတ်သေးငယ်သောအိမ်များတွင်ပါဝင်နိုင်သည် , ဒါပေမယ့်သူတို့ကလုံလောက်စွာကျင့်သုံးနေမှသာ။
American Mastiff ကို Dr. Jekyll နှင့် Mr. Hyde တို့၏ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်ယူမှတ်ပါ။ သူတို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်အတူ, ဤခွေးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ကြင်နာဖြစ်ကြသည်။ သူစိမ်းများနှင့်အလားအလာရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများ, သူတို့ကလုံးဝရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပါတယ် ။
Bandogges ဆိုတာသိရလို့သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ် ကလေးတွေနှင့်အတူကြီးမြတ် သူတို့ရဲ့အကာအကွယ်, အလိုလိုသိသောသဘာဝကြောင့်။ ၎င်းတို့သည်ကလေးထိန်းသူအဖြစ်လူသိများပြီး၊ 'Mama Bear' နှင့် 'Silent Peacekeeper' ကဲ့သို့သောအမည်ပြောင်များရရှိသည်။
သင့်ရဲ့ Bandog ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သကဲ့သို့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသေးငယ်စေလို့မရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားကြောင့်အလေးသာတိုးပွားစေပါသည် ကလေးများထိခိုက်နိုင်သည် ကစားစဉ်အတွင်း။
MastiBulls သည်များသောအားဖြင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူရတတ်ပြီးသူတို့အတူတကွကြီးပြင်း။ ကောင်းမွန်စွာပေါင်းသင်းခြင်းခံရပါက။ ဤအထူးချွန်သောအမေရိကန် Bandogges သည်နေ့လည်ခင်းကစားပွဲကိုအတူတကွပျော်မွေ့စွာကြည့်ပါ။
သို့သော်သင်၏ Bandog သည်မသိသောလူသားများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
ဤသည် doggo ရဲ့ဆောင်ပုဒ် 'ဖြစ်ပါတယ် ပထမ ဦး ဆုံးကိုက်, နောက်ဆုံးမေးခွန်းများကိုမေးပါ ။ ' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ၎င်း, သူတို့နယ်မြေနှင့်ရဲရင့်ပါတယ် ။ သူတို့ကအလွယ်တကူပြန်ဆင်းကြပါဘူး, သူတို့သည်ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်ပြုမူရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်။
American Bandogges သည်အခေါက်အခေါက်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ တကယ်တော့ဒီခွေးများ အများကြီးဟောင်ပါဘူး ။ တစ်နည်းဆိုရသော်၎င်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုမီသတိပေးခြင်းမရှိပါ။
ဤသည်သေချာပေါက်သူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးအပေါ်အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အစောင့်ခွေးများသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏ခြေထောက်ပေါ်တွေးနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ၎င်းသည်ဆိုလိုသည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောပိုင်ရှင်များကဒီဖောက်၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ့ကိုင်သင့်ပါတယ် ။
Workaholics တွေကဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုပြန်ရဖို့လည်းစဉ်းစားချင်လိမ့်မယ်။ Bandogges သည်သူတို့၏အမည်ကိုတစ်နေ့လုံးချည်နှောင်ထားခြင်းမှခံရသည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်ဒီမျိုးဆက်သည်တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်းနှင့်ဝေးသည်။
American Bandogge Mastiff ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
Bandogs များသည်မောင်းနှင်မှုရှိပြီးအသိဉာဏ်ရှိသော်လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန်သူတို့၏စိတ်ဆန္ဒသည်“ လုံးလုံးလျားလျားပျော့ပျောင်းသော” မှ“ ကြီးစိုးသော alpha” အထိရှိသည်။
သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဗီဇကိုပေးတယ် ဝါရင့်ခွေးပိုင်ရှင်လိုအပ်သည် ။ သင့်တော်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှုမရှိပါကဤခွေးတစ်ကောင်များသည်ရန်လိုပြီးထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
သူတို့သည်အာရုံစိုက်မှုကိုနှစ်သက်သော်လည်းအခွင့်အာဏာလိုအပ်သည် ။ ဒီအပြည့်အဝအားသာချက်ယူအပြုသဘောအားဖြည့်ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ခွေးဝင်ငွေရှိပါတယ်အခါ ရယူထားသော နှင့် playtime, သူသည်မိမိအမူအကျင့်ကိုသတိရဖို့အများကြီးပိုပြီးလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
အားကြီးသောလေ့ကျင့်မှုများကိုရှောင်ပါ ။ သင်လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကသင့်ခွေးကိုသင်နဲ့အခြားလူသားတွေကိုကြောက်ရွံ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ဖို့သင်ဖို့ဖြစ်တယ်။
မှန်ကန်စွာပြုမိသောအခါ, MastiBull လေ့ကျင့်ရေးဖောက်ရဲ့အားသာချက်များကိုချန်ထားပါနှင့်ထိပ်တန်းခွေးအဖြစ်သင်၏အနေအထားကိုအားဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ခွေးကလေးသည်နာခံခြင်းအတန်းသည် Bandogge လူငယ်အတွက်ကောင်းသောအုတ်မြစ်ချရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏လူမှုရေးကိုညာဘက်ခြေထောက်မှစလိမ့်မည်။
သင်၏ခြေလေးချောင်းရှိသော Hercules ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုလေ့လာနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ, ဒီဖောက် အလေးချိန်ဆွဲခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်း၊ !
အကာအကွယ်ပေးရေးသင်တန်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသော American Bandogge ၏ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ သူဟာလုပ်ဖို့အဘယျသို့လေ့ကျင့်သည်သာမက, သူသည်မိမိကိုင်တွယ်သူနှင့်အချိန်တစ်ခုလုံးတွင်လုံးဝညှိထားခြင်းခံရသည်။
မှတ်မိဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲဒါပဲ သင်က pack ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြသည် ။ သင်၏ MastiBull သည်သင့်အားသူဌေးအဖြစ်မြင်ရန်လိုအပ်သည် နှင့် မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်ပါ။ သင့်ခွေးနှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများ၏လုံခြုံမှုသည်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပေမည် အမေရိကန် Masti-Bull ထိန်းသိမ်းမှုဆိုးဆိုးရွားရွားတောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ပါဘူး ။
သငျသညျလေ့ကျင့်ရေးအပေါ်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, သင့် Bandog ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အသွင်အပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပန်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခတ် အလယ်အလတ်သွန်းလောင်း ။ တစ် ဦး ကဲ့သို့ရော်ဘာဖြီးကိုသုံးပါ ဖြည့်စွက်လက်အိတ် , တစ်ပါတ်2မှ3ကြိမ် မြည်းကြိုးကိုဖြည်သို့မဟုတ်အသေဖယ်ရှားပစ်ရန်။ အမှန်တကယ်သူတို့၏ကုတ်အင်္ကျီ၏ထွန်းလင်းမှုကိုထုတ်ယူရန်သန့်ရှင်းသောအထည်ဖြင့်သူတို့ကိုသုတ်ပါ။
ဤခွေးဖြစ်ကြ၏ drool နှင့်အနည်းငယ်အနံ့ရရန်လူသိများ သင်၏ pooch ကိုမကြာခဏရေချိုးရန်တိုက်တွန်းမှုကိုတွန်းလှန်ပါ။
သင့်ရဲ့ Bandog အရေးအကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်aခွေးသုတ် သို့မဟုတ်သူ၏အရေခွံများအကြားသန့်ရှင်းစေရန်စိုစွတ်သောအထည်။ ၎င်းသည်သူ၏အမွေးများခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအနံ့ရစေနိုင်သည်။
လက်သည်းညှပ်များကိုလစဉ်လတိုင်းဖြစ်နိုင်သည် နေ့စဉ် သွားကုသမှု စံပြပါပဲ။ သင်၏လက်ဖက်ရည်သောက်သည့်ခွက်ကြီးမဟုတ်သောမေးရိုးနှင့်နီးကပ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထပါကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သွားများကိုအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သွားတိုက်ပါ။
သင်၏ Bandog ကိုအစာမကျွေးမီ၊ တကယ် puppyhood အတွက်မိတ်ဆက်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်သည်ရေချိုးချိန်တွင်ပေါင် ၁၀၀ ပေါင်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်ကိုမလိုချင်လျှင်သို့မဟုတ်လက်သည်းညှပ်များကိုကန်ခြင်းမပြုပါကထိုအရာသည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ Bandog ရဲ့ဝမ်းအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်ခြင်း
ခွေးကြီးများစားကြသည် အများကြီး ။ သင့်ရဲ့အမေရိကန် Mastiff လိုအပ်ပါတယ်4ခွက်မှ5ခွက် နေ့စဉ်အစားအစာ။
ဤပမာဏကိုအစားအစာနှစ်မျိုးခွဲပါ။ ကျန်းမာရေးပြissuesနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အတွက်အမြန်အစာစားခြင်းကိုသတိပြုပါ။ သို့ကြည့်ပါ နှေးကွေးသောဖလား သင့်ရဲ့ MastiBull သည်သူ၏ kibble ချ scarfs လျှင်။
ဒီမိုးသည်းထန်စွာ droolers ဖြစ်ကြသည် မကြာခဏရေငတ်သည် နှင့်မရှိသလောက် slobbered-in ရေကိုသောက်လော့။ သင်၏ Bandog အားသန့်ရှင်းသောရေနှင့်သန့်ရှင်းသောရေဖြည့်တင်းပေးခြင်းသည်ဒုတိယအလုပ်တစ်ခုဟုခံစားရပေမည်၊ သို့သော်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသူတို့တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
Bandogge Mastiffs သည်မျှတစွာလှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ သူတို့ကကြီးမားတဲ့ခြံမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုမပါဘဲဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ဆွဲပါ ၁ နာရီမှ ၄၅ မိနစ် သူတို့ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတဲ့အနေဖြင့်စောင့်ရှောက်ရန်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း၏။
သင်၏ Bandog သည်ရိုးရှင်းသောခွေးများလေ့ကျင့်ခန်းနည်းစနစ်များကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
သူတို့အားတူညီသောလိုင်းများတစ်လျှောက်တွင်သူတို့သည်မြင့်မားသောခွေးတစ်ကောင်၏ခံနိုင်ရည်ရှိသောခြံစည်းရိုးအတွင်း၌သာရှိနေပါကသင်၏ Bandog ကိုသူတို့၏ခြေထောက်များကိုချွတ်။ leash လုပ်ပါ။
ဤသည်ကိုသင်ချောင်ချင်သော Fidi မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ခွေးတစ်ကောင်ကိုထိခိုက်စေခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထိခိုက်စေခြင်းအတွက်သင်တာ ၀ န်မထမ်းဆောင်လိုပါ။
MastiBulls သည်စွမ်းအင်အချို့ကိုလောင်ကျွမ်းရန်အတွက်နည်းလမ်းများစွာရှိနေသေးသည် ရေကူး ဒါမှမဟုတ် ပဟေgamesိဂိမ်း ။ သင့်ရဲ့ Masti-Bull ရဲ့အဆစ်ပိုမိုအထိခိုက်မခံသောအခါဤကဲ့သို့သောအနိမ့်သက်ရောက်မှုလှုပ်ရှားမှုများ puppyhood နှင့်အသက်ကြီးစဉ်အတွင်းစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။
နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာ Bandogges သည်သင်၏မိသားစုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာချစ်မြတ်နိုးပြီးကာကွယ်နိုင်သည်။ ပျမ်းမျှသက်တမ်းနှင့်အတူ 10 နှစ် သူတို့ခဏန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ယခုမှာမကောင်းတဲ့သတင်း: Bandogs ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့သူတို့မနိုင်မနင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအင်အားကြီးများသည်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပြီးမလွှဲမရှောင်နိုင်သောကြီးမားသောကျန်းမာရေးပြissuesနာများနှင့်လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
သင်၏ Masti-Bull အမွေဆက်ခံမည့်မျိုးရိုးဗီဇအခြေအနေများမှာ autoimmune သိုင်းရွိုက် တိုးတက်သောလွှာကျုံ့ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တံတောင်ဆစ်ခွဲစိတ်မှုကဲ့သို့အရေပြားပြproblemsနာများကဲ့သို့ကင်ဆာ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါများ။
နောက်ထပ်ဘုံရောဂါဖြစ်ပါတယ် ဖောင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ် dilatation-volvulus ။ ၎င်းစာရင်းသည်ဤစာရင်းတွင်ပါသည့်အနိမ့်ဆုံးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်ခွေးသည်အစာအိမ်တွင်ဓာတ်ငွေ့များလွန်းသည့်အခါဖြစ်ပေါ်သည်။
၎င်းသည်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုလိုအပ်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင်ယူပါ သင်၏ MastiBull သည်ဤအခြေအနေကိုခံစားနေရသည်ဟုသင်သံသယရှိပါကအလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရန်အသင့်ရှိပါ။
Bandogges, သူတို့ရဲ့သူချင်း Mastiff ဆွေမျိုးများနှင့်အတူရှိသည် မြင့်မားသောနာကျင်မှုသည်းခံစိတ် , ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့နာကျင်သို့မဟုတ်နေမကောင်းခံစားနေလျှင်သင်ချက်ချင်းမသိရလိမ့်မည်။
အသားအရေကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စေပြီးအစာစားပြီးနောက်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်အနားယူစေခြင်းကဲ့သို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ပါ။ ပုံမှန် vet လည်ပတ်မှုနှင့်အတူတက်ထားပါ နှလုံးရောဂါ , ခွေးလှေးနှင့်ဆေးများကို tick ။
အခြား Molosser ခွေးများကဲ့သို့ပင်အမေရိကန် Bandogge သည်aအငြင်းပွားဖွယ်ဖောက် ။ သူတို့ပါပဲ မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မတည်မငြိမ်အဖြစ်ရိပ်မိ၏ သူတို့ကိုလုံးဝပိတ်ပင်ရန်အချို့သောဒေသများသို့ ဦး ဆောင်။
ရိုမေးနီးယား၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အစိတ်အပိုင်းများရှိသည် တရားမဝင် MastiBull ပိုင်ဆိုင်မှု။ ထို့အပြင်အချို့တိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးမှုများသို့မဟုတ် HOAs များသည် Bandog တွင်သင့်အား Bandog မ ၀ ယ်ရန်တားမြစ်ထားသည့်တားမြစ်ချက်များချမှတ်ထားသည်။
သင်သုတေသနပြုပြီးသင်၏inရိယာ၌ Bandog Mastiff ကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်လျှင်၎င်းသည်စုဆောင်းရန်အချိန်ရောက်သည်။ အမေရိကန် Bandogge ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာတက်နိုင်သမျှများတယ် $ 2500 ။
ဒီငွေအမြောက်အများကိုထုတ်ပစ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလား။ သင်အမြဲတစ် ဦး Masti-Bull ကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးမွေးစားခြင်းအတွက်ရှာဖွေခြင်းသည်သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။
အမေရိကန် Bandogge မျိုးဆက်များ
များသောအားဖြင့်လူတို့သည်မျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ခွေးဂေဟာများကို ဖြတ်၍ သွားသောအခါသူတို့၏ pup ၏မျိုးရိုးကိုသူတို့သိကြသည်။ Bandog ၀ ယ်တာဟာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။
ဤမျှလောက်များစွာသောမျိုးပွားသည်သင်၏ pup ၏သွေးအတိအကျကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အမေရိကန် Bandogge ဖွဲ့စည်းနိုင်သည် မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
Bagheera, Bandog နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ပုံရိပ်ရင်း
အများစုမှာခွေးကလေးများ2မှ3ဝတ်ရည်ပေါင်းစပ် American Bandogge Mastiff ၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးရန်။
သင့်ကိုသင့်ရဲ့ Masti-Bull ရဲ့အမေနဲ့အဖေကိုမိတ်ဆက်ပေးသင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်မျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအကန့်အသတ်ရှိရင်မအံ့သြသင့်ဘူး။
မင်းရဲ့ MastiBull မှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ရှိနေရင်တောင်၊ တာဝန်ရှိသောခွေးကလေးများသည်သင့်အားကျန်းမာရေးအာမခံတစ်ခုပေးသင့်သည် သင့်ရဲ့ကလေး Bandog နှင့်၎င်း၏မိဘများအဘို့။
စကားမစပ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်လက်မှတ်များဖြစ်ကြသည် အတူတူမဟုတ်ဘူး VET စစ်ဆေးမှုများအဖြစ်။
မကြာမီသူတို့သည်တတ်နိုင်သလောက် Bandog ခွေးပေါက်စများကိုမြင်ကွင်းများ၊ အသံများနှင့်အနံ့အသစ်များနှင့်ထိတွေ့သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် မတိုင်မီ သင့်ရဲ့ကလေးကသင်နဲ့အတူဝင်ပြီးသူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆက်လုပ်သင့်တယ်။
ဒီတော့ဘယ် Bandogge ကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲ။ ဤတွင်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်အနည်းငယ်မွေးမြူသူများဖြစ်သည်။
အမေရိကန် Sentinel K9 (ဂျက်ဆင်၊ MS)
K9 ပညာရှင် (Franklinton, NC)
Blasco မိသားစုခွေးဘီလူးများ (ဘာ)
သင် Facebook ကဲ့သို့စာမျက်နှာများကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည် အနောက်ကမ်းခြေ Bandog Mastiffs နီဗားဒါးမှာသူတို့မှာအမေရိကန် Bandogge ခွေးတွေရောင်းဖို့ရှိမရှိသိဖို့။
အမေရိကန် Bandogge အားကယ်တင်ခြင်း
Bandogs နှင့်သူတို့၏ Molosser ဝမ်းကွဲများအားလူတိုင်းမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။ ဝမ်းနည်းစရာကလူတွေကသူတို့ဝါးနိုင်တာထက်ပိုပြီးအကိုက်ခံရတဲ့အခါဒီလိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့မျိုးပွားတွေဟာအမိုးအကာတွေ၊
တခါတရံမှာ, ခွေးရဲ့အပြုအမူအလွန်အကျွံဖြစ်ထေူ၏။ အခြားကိစ္စများတွင်ဘဏ္responsibilityာရေးတာ ၀ န်သည်မတတ်နိုင်သောဖြစ်လာသည်။
သင်မွေးစားလိုပါကကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည့် MastiBull ကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်၎င်းင်း၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲလုပ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါ ။ လက်နက်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာကင်းမဲ့ခြင်းသည်သူတို့၏သတိနှင့်အကာအကွယ်စရိုက်များကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
ဒေသခံအမိုးအကာများတွင် Bandogge Mastiff နှင့်ဆင်တူသည့်မျိုးဆက်များရှိသည်။ သင်မည်သည့် Bandog အမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်ရသနည်းဆိုလျှင်ဤအရာသည်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
သင်ဖြစ်နိုင်သမျှစစ်မှန်သောအမေရိကန် Masti-Bull နှင့်နီးစပ်လိုလျှင် Molosser မွေးမြူရေးစင်တာများအတွက်သုတေသနပြုပါ။
Mutts to Mastiffs (Chambersburg, PA)
Bullpen Way Station နှင့်သန့်ရှင်းရာဌာန (Norwood, GA)
ထိုအခါထိုကဲ့သို့သောအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများ, ရှိပါတယ် အမေရိကန် Bullmastiff အသင်း , သူတို့အသစ်တစ်ခုပိုင်ရှင်ရသည်အထိဤခွေးတစ်ကောင်ထွက်သည်ကြည့်ရှုသည်။
အမေရိကန် Bandogge Mastiff သည်အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်သောcanရာမခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် အတွေ့အကြုံရှိသောပိုင်ရှင်များသာ ။ သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသောအခြမ်းကို pack အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သာသီးသန့်ထားရှိသည် မကြောက်တရားကာကွယ်ပေး ။
TO သို့ စစ်မှန်တဲ့ alpha ခွေး , Masti-Bulls တစ်ဆုံးဖြတ်ချက်မထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်။ သင်ဤ crossbreed ရဲ့လေးစားမှုဝင်ငွေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ စိန်ခေါ်မှုအတွက်လား။
American Bandogge ကခြိမ်းခြောက်တာလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နှစ်ခုစလုံး? အဘယ်ကြောင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
Pomsky: ဒီဒေါ်လာ ၅၀၀၀ လောက်အကုန်သိသင့်တယ်
ခွေးလေးတွေက ၁၀ ပတ်မှာဘယ်လောက်အိပ်သလဲ
သေးငယ်တဲ့ siberian huskies တွေကဘယ်လောက်ကြီးသလဲ
king charles cavalier နှင့် bichon frize ရောမွှေပါ
puppy harness ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ
အမျိုးသမီးဝံပုလွေသည် native American ဖြစ်သည်